ChromeOS ichaenderana neGnu / Linux application | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe ichokwadi kuti vashandisi veGoogle ChromeOS havana kuwanda sevashandisi veDebian, Linux Mint kana Fedora, chokwadi ndechekuti ichiri imwezve kugovera, asi kwete GNU asi iri yeGoogle.
Iyo huru kambani yekutsvaga injini yasarudza kugadzirisa yayo yekushandisa system uye kuita kuti iwirirane zvakanyanya neGnu / Linux kunyorera. Iyo ChromeOS inotevera inovandudza ichaenderana neLinux chaiyo michina.
Iri idanho rakakura kubvira inobvumidza kuitiswa kweGnu / Linux kunyorera paGoogle ChromeOS. Izvi zvinoenderana hazvizove zvenguva pfupi asi zvinotarisirwa kusvika kupera kwa2018.
Pamwe pamwe nekuenderana uku, Google ChromeOS ichave nerutsigiro rwehuwandu hukuru hwekushandisa uye mapurogiramu emakomputa kubvira kwenguva yakareba haingotsigire mashandisirwo ayo chete asi zvakare inotsigira maapplication eApple, ichiwedzera katarogu yayo yekushandisa kunyangwe.
Zvishandiso zveGnu / Linux hazvisi zvakawanda kupfuura maficha eiyo ecosystem, asi isu tinofanirwa kurangarira izvo nyika yeServer yakafukidzwa neLinuxNaizvozvo, mushure mekutsigira iyi mhando yekushandisa, ChromeOS ichave nekwaniso kumaturu akasiyana siyana ekugadzirisa maratidziro nemaseva.
Kunyangwe paine vashandisi vazhinji vanoti ChromeOS inozopedzisira yanyangarika ichida Android, chokwadi ndechekuti Google inowedzera kuisa rutsigiro muGoogle ChromeOS, iyo inondiudza kuti zvirongwa zveGoogle zvichave zvakafanana nemamwe mapurojekiti emahara akadai saPureOS, ayo anotarisira kugadzira kugovera kwemafoni uye imwe yedesktop uye kuti ese ari maviri anogona kusangana kana kuenderana zvakafanana.
Ini pachangu, handifunge kuti rutsigiro urwu rweGnu / Linux runoshandura mafambiro eChannelOS zvakanyanya, asi chichava chinhu icho vano "gona" vashandisi vanouya kana kuziva nezveGnu / Linux vachazoona zvakanaka, kunyangwe tichifanira kutaura izvozvo huzivi hwehurongwa hwekushanda hunoramba hwakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » ChromeOS ichaenderana neGnu / Linux application
10 terminal emulators kune yako system